DEG DEG:- Qarax aad u xoogan oo goordhaw ka dhacay Muqdisho iyo qasaare lixaad leh oo ka dhashay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Qarax aad u xoogan oo goordhaw ka dhacay Muqdisho iyo qasaare lixaad leh oo ka dhashay
Qarax aad u xoogan ayaa daqiiqado kahor ka dhacay inta u dhaxeeysa taalada Sayidka ee magaalada Muqdisho iyo xarunta baarlamaanka federaaalka Soomaaliya.
Qaraxaan ayaa la sheegayaa inuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay gaari kale oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa agagaarka taalada Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Rasaas aad u culus ayaa haatan laga maqlayaa goobta uu qaraxa ka dhacay, iyadoona ilaa iyo haatan aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi.
Ciidamo badan oo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goordhaw soo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay, waxayna gebi ahaan xireen dhamaan wadooyinka soo gala halka uu qaraxa ka dhacay.
Dhinaca kale, wariyaha warbaahinta Bulshoweyn oo goordhaw gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegayaa inuu jiro qasaare lixaad leh oo ka dhashay qaraxaasi balse aan si rasmi ah loo xaqjiijin karin inta uu qasaarahaasi gaarsiisan yahay.